Xadiga saxda ah ee cabitaanka Qahwaha oo aan weliba waxyeeleyn jirka oo la soo saaray… – Hagaag.com
Xadiga saxda ah ee cabitaanka Qahwaha oo aan weliba waxyeeleyn jirka oo la soo saaray…
Posted on 6 Nofeembar 2019 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Dad badan oo adduunka ku nool ayaa waxay ku bilaabaan maalintooda koob qaxwo ah. Waxay hagaajisaa dareenka oo kordhisaa firfircoonida, waxay kaloo ay leedahay faa’ido caafimaad oo badan, waxay kaloo yareysaa khatarta dhimashada deg degga iyo halista cudurka wadnaha, sidoo kale waxay la dagaalantaa murugta oo u kordhisaa farxad weyn qofkii cabba, waxay sidoo kale kaa kaalmeysaa gubida baruurta jirka, halka Caffeine-ka uu ku jiro maado kaa ilaalisa cudurada loo yaqaan ‘Parkinson’s iyo Alzheimer’.
Laakiin inkasta oo ay leedahay faa’iidooyinkaas, hadana qaxwaha sidoo kale waxay leedahay khatarteeda gaarka ah, gaar ahaan markaad cabtid xaddi badan, maxaa yeelay waxay kor u qaadi kartaa dhiigga, waxayna kordhin kartaa halista wadne istaagga, hadaba waa maxay qaddarka saxda ah ama imisa koob oo ay tahay inaysan dhaafin maalin kasta?
Baarayaal badan ayaa wareerisay ka jawaabida su’aashan, waxayna sameeyeen daraasado badan si ay uga jawaabaan su’aashan, oo ay kujirto daraasad ay dhawaan sameeyeen jaamacad ku taala wadanka Australia, cilmi baarayaashu waxay ogaadeen natiijada xadiga saxda ah ee cabitaanka qaxwaha oo weliba aan waxyeeleyn jirka.
Intii lagu guda jiray daraasada, cilmi baarayaasha Jaamacada Koonfurta Australia ayaa waxay ururisay xogta 347,077 qof oo ay da’doodu u dhaxayso 37 ilaa 73 jir, oo lagu keydiyay Bangiga loo yaqaan ‘British Biobank’.
Sida lagu xusay daraasadda, cabidda in ka badan lix koob oo qaxwa maalintiiba waxay kordhisaa halista cudurka wadnaha 22%.
“Qiyaastii saddex bilyan oo koob oo qaxwa ayaa maalin walba adduunka laga cabaa. In la Ogaado xadka iyo faa’iidada iyo waxyeellada ay leedahay waa muhiim,” ayay tiri Professor Elena Hyubenen, oo ka qeyb qaadatay daraasadda.
Daraasadu waxay soo jeedisay in cabista kafee xad dhaaf ahi ay kordhiso halista ah in dhiig karka uu sarreeyo, taas oo iyana horseedi karta cudurka wadne xanuunka.
Waa in la ogaadaa in cabirka kafeeyiinta ay kuxirantahay tayada kafeega, dubitaankiisa, iyo habka diyaarintiisa, iyo sidoo kale dhererka jirka iyo culeyska iyo xaalada caafimaad ee qofka, sida lagu sheegay website-ka joornaalka Jarmalka “Stern” oo si fiican loo yaqaan.
Wargeyska Jarmalka ayaa xaqiijiyey in Isticmaalka 400 milligram ee kafeeyn ah aan wax yeeleyn qof weyn oo caafimaad qaba.